စိတ်ဓါတ် ပုံဆောင်ခဲတစ်ချို့ မီးတင်ရှို့
ငါ ဒဏ်တော့ ကျန်ရစ်ခဲ့ဦးမယ်...
ရထား...၊ ရထား... ဆိုတဲ့အရာကို ဘ၀ခရီးတွေနဲ့ နှိုင်းလေ့ရှိကြတယ်...။ မကြာခဏဆိုသလို တွေးမိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ် ဆိုတာလည်း ရထားတစ်စင်းလိုပါပဲလား ဆိုတဲ့အကြောင်း....။ ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းရမယ့် ခရီးအတွက် လောင်စာတွေဆိုတာက အမျိုးမျိုးအထွေထွေ...။ ဘ၀နဲ့အတူ စီးမျှောနေတဲ့ စိတ်တွေ စီးဆင်းဖို့ကရော ဘာလောင်စာတွေ လိုမှာတဲ့လဲ...။ စိတ်ရဲ့ လိုအပ်မှုအတွက် တစ်ချို့အရာတွေကို လောင်မြိုက်ပြီး လောင်စာအဖြစ် ပြုလုပ်နေရာမှာ ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့ ဘယ်အရာတွေကရော လောင်ကျွမ်းနေပြီလဲ...။ စိတ် ဆိုတဲ့ ရထားတစ်စင်းက တရွှေ့ရွှေ့ သွားရင်းနဲ့မှ ရင့်ကျက်လာသတဲ့...။ စိတ် ကို ရင့်ကျက်ဖို့ ဘယ်အရာတွေကို စတေးရမှာလဲ..၊ ဘယ်အရာတွေကို လောင်ကျွမ်းရမှာလဲ....။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကိုယ်မသိထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရိုးသားမှုတွေဟာ အတိုက်စားခံရရင်းနဲ့ ပျောက်ဆုံးကုန်နေပြီလား....။ စိတ် ရထား... ကတော့ သွားနေဦးမှာပဲ...။ မသိလိုက် မသိဖာသာ ပျောက်ဆုံးမှုတွေကလည်း ရှိနေဦးမှာပဲလေ....။)
စိတ်ရဲ့ လိုအပ်မှုအတွက် တစ်ချို့အရာတွေကို လောင်မြိုက်ပြီး လောင်စာအဖြစ် ပြုလုပ်နေရာမှာ ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့ ဘယ်အရာတွေကရော လောင်ကျွမ်းနေပြီလဲ...။ စိတ် ဆိုတဲ့ ရထားတစ်စင်းက တရွှေ့ရွှေ့ သွားရင်းနဲ့မှ ရင့်ကျက်လာသတဲ့...။ စိတ် ကို ရင့်ကျက်ဖို့ ဘယ်အရာတွေကို စတေးရမှာလဲ..၊ ဘယ်အရာတွေကို လောင်ကျွမ်းရမှာလဲ....။
congratulation ပါ အနုပညာအရည်အသွေး တွေပိုတက်လာပါစေ
စိတ် ရထား... ကတော့ သွားနေဦးမှာပဲ...။ မသိလိုက် မသိဖာသာ ပျောက်ဆုံးမှုတွေကလည်း ရှိနေဦးမှာပဲလေ....
ဘ၀...ဘ၀... ဒီလိုနဲ့ဘဲ...မသိလိုက် မသိဖာသာ ဖြတ်သန်း နေကြ ရတာပါလေ...
Nice sweet home. That is simple and beautiful. Thanks for sharing.